ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: January 2012
ကူးလူးဖလှယ် စီးပွါးရေးနယ် (အချုပ်)
စီးပွါးရေးလုပ်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် ဝန်ထမ်းဘဝဖြစ်ဖြစ် ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ် အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားနော်၊ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်ကူးက ကွန့်နိုင်တာမို့ ဝါသနာပါရင် အောင်မြင်ကြတာလို့ ခရစ္စတလ်က မြင်ပါတယ်။ တခါတလေတော့လည်း အနာဂတ်ဘဝလမ်းမှာ အဆင်ပြေစေဖို့ ဝါသနာပါလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပေါ့နော်။ ဒါ့အပြင် ကျန်တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေလည်း အများကြီးပေါ့။
ဥပမာ-ချောဆိုရင် ပန်းလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ပန်းလေးတွေကို ရွေးစိုက်မယ်၊ ပန်းလေးတွေရဲ့ သဘာဝ၊ ပြုစုပျိုးထောင်မှုတွေ လိုအပ်ချက်တွေ ဒါတွေသိထားမယ်ဆိုရင် ခြံစိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကို အကောင်ထည်ဖေါ်လို့ရပြီပေါ့။
ငွေကတော့ သူပိုင်တဲ့ ကျောက်စိမ်းတစ်တုံးလောက် ဖြိုလိုက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်လေ၊ သူခရီးသွားနေတုန်း ပြောလို့ကောင်းလိုက်တာနော် :)
သစ်ခွခြံစိုက်ပြီး ရလာတဲ့ အပွင့်လေးတွေကို ရောင်းမယ်၊ အလှဖန်တီးရှင်တွေနဲ့ ချိတ်ထားမယ်၊ ခြံမှာလည်း လက်လီရောင်းမယ်။ အပင်ပေါက်လေးတွေကိုလည်း ထပ်ဆင့်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေနေပါပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နိုင်လောက်တာမှန်သမျှ ကြံဆတွေးတောထားရမှာပါပဲ၊ ဒီအထဲမှာ ကံမလိုက်လို့ အပင်တွေ ပိုးကျနိုင်တာ၊ ရာသီဥတုကြောင့် အပင်တွေ မပွင့်တာ ဒါကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရအုံးမှာနော်။ (ရေးရင်းနဲ့ သစ်ခွပန်းစိုက်နည်းဖြစ်မှာစိုးလို့ တော်ပြီနော်)
ဆိုတော့ မြန်မာပြည်က သစ်ခွ၊ ထိုင်းသစ်ခွနဲ့ တရုတ်သစ်ခွ ဘယ်သစ်ခွပန်းတွေက ဈေးကွက်ပိုဝင်လဲ၊ လူကြိုက်များလဲ၊ ဘယ်နိုင်ငံက မှာရင် ဈေးသက်သာမလဲ စသည်ဖြင့်။
မြန်မာပြည်နဲ့ အနီးဆုံး ရေမြေသဘာဝ သိပ်ကွာခြားမှုမရှိလှတဲ့ ထိုင်းဘက်ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။
ထိုင်း-မြန်မာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေမှာ အလေ့အထများတာ နှစ်ခုရှိပါတယ်၊
တစ်ခုကတော့ ဈေးကွက်ဈေးနှုန်းများ စုံစမ်း ဈေးကစားလိုကြတာနဲ့ အမှန်တကယ် ဈေးဝယ်လိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အုန်းသီးကိုအရင်းပြုလို့ အိမ်တွင်းစီးပွါးရေးလေးတစ်ခုလုပ်ကိုင်ကြတာ အတော်လေးကြီးပွါးကြတယ်။
ဈေးကစားတာ ဈေးကွက်သိချင်တာကြောင့် စုံစမ်းတာတွေဟာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ စုံစမ်းကြတာကြောင့် ထိုင်းက လုပ်ငန်းရှင်တွေတောင် တော်တော်သိနေပါပြီ။ သူတို့စကားအရတော့ မြန်မာတွေ အထာနှပ်နေပြီလို့ ပြောကြပါတယ်။ ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေက မြန်မာတွေ ဈေးလာမေးရင် တကယ်ဝယ်မယ်လို့ မထင်တာများနေပါတယ်။ ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေ များလာတဲ့အခါ ပုံမှန်ဈေးစုံစမ်းရုံသက်သက်ဆိုရင်တော့ တကယ်ဈေးအမှန်ကို သိရဖို့ အဆက်အသွယ်ကောင်းရဖို့ အတော်ခဲယဉ်းသွားပါပြီ။ တကယ့်လက်ကားဈေးအမှန်၊ ဈေးအမှန်ပေးမယ့် လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ ဆက်သွယ်ရတာလည်း ခက်သွားတတ်ပါတယ်။ တချို့ဆို (၂)နှစ်လောက် လက်ကားဈေး တဆင့်ခံတွေဆီက ဝယ်နေရင်းမှ တကယ့် ဈေးအမှန်ရောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရအောင် ရင်းနှီးထားရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ စက်ရုံတွေက ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို delivery တွေကို လက်လွဲပေးလိုက်တာကြောင့် မူလစက်ရုံကို ဆက်သွယ်ရ လမ်းစပြတ်သွားတတ်ပါတယ်။
မနက် ငါးနာရီလောက်က စပြီး အုန်းသီးရေခဲမုန့်စည်တွေ လက်လီပြန်ရောင်းမယ့်သူတွေက လာယူကြပါတယ်။ အုန်းရည်ရောင်းမယ့်သူတွေအတွက်လည်း အဆင်သင့်ရောင်းနိုင်အောင် လုပ်ပေးကြပါတယ်။
ထိုင်းဘက်နေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဈေးဝယ်သူတွေ အမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်။
- လက်လီဝယ်သူတွေထဲက တစ်ဒါဇင်ဈေးဝယ်လိုသူ
- မိမိဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွက်သာ ဈေးဝယ်သူ (ရန်ကုန်-မန္တလေး ဆိုင်နှစ်ဆိုင်အတွက် ဝယ်လိုသူ)
- ရန်ကုန်မြို့တွင်း လက်ကားဖြန့်သူ
- မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို လက်ကားဖြန့်သူ စသည်ဖြင့်...........
လက်လီနဲ့ တစ်ဒါဇင်ဝယ်လိုသူတွေအတွက် ထိုင်းမှာ ဈေးဝယ်လိုသူကို လမ်းညွှန်ပေးရတာလွယ်ပေမယ့်
လက်ကားဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုဝယ်ချင်တာလဲ ဈေးဘယ်လောက် သက်သာချင်တာလဲ၊
အရည်အသွေးဘယ်လောက် နဲ့ ဈေးနှုန်းဘယ်လောက် လိုချင်တာလဲ၊ ပုံမှန်လက်ကားဈေး(အရည်အတွက် ရာဂဏန်းဈေး)နဲ့ စက်ရုံဈေး(အရည်အတွက် ထောင်ဂဏန်းဈေး)ဖြစ်ပါတယ်။
ရာဂဏန်းဈေးအတွက် လက်ကားရောင်းတဲ့ ဈေးဆိုင်တွေ သွားမေးရ ဝယ်ရတာလွယ်ကူပေမယ့် စက်ရုံဈေးလိုချင်တယ် ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး လိုချင်တာ ဖြစ်ချင်တာတွေညှိဖို့ စက်ရုံတွေကို အဆက်အသွယ်ရဖို့ စက်ရုံဈေးရဖို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့ အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်ပို့ဖို့ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်နဲ့ စက်ရုံဈေးပေါင်းလိုက်ရင် ထိုင်းဈေးနှုန်းတစ်ခုရလာပါမယ်။
မြန်မာက လက်ကားဖြန့်မယ့် ကုန်သည်ကြီးတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်ဘက်ခြမ်း သယ်ဆောင်စရိတ်ပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံကို ကုန်ပစ္စည်းများ ကူးသန်းရောင်းဝယ်လိုတယ်ဆိုရင်တော့ နမူနာပစ္စည်းများကိုပြပြီး ဈေးနှုန်းများ လိုသလိုညှိနှိုင်းကြပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီစဉ်ကြကာ မြန်မာနိုင်ငံ (ပစ္စည်းလက်ခံမည့်မြို့)အရောက် ပို့ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ ကုန်သည်တွေ ပစ္စည်းမှာမယ်ဆိုရင် ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ လုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
တစ်ခုက စက်ရုံလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ပေးကြပါတယ်။ ချိတ်ပေးခ မိတ်ဆက်ခကို လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်ပြီး ငွေအပြတ်ယူကြပါတယ်။ ဒါကလည်း အဆက်အသွယ်ရှာပေးကြတဲ့သူတွေက ထိုင်းတွေနဲ့ စက်ရုံကို မြို့ခြားပြီး လိုက်ရှာတဲ့အခါ ခရီးစရိတ် ကျွေးမွေးစရိတ်စသည်ဖြင့် ကုန်ကျတာတွေလည်း ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆက်ရုံကလွဲရင် ကျန်တာတွေ ဘာမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမလုပ်ပေးကြပါဘူး။ လုပ်ငန်းအပေါ် ဝင်ရောက်စွပ်ဖက်ခြင်းမပြုကြပါဘူး။ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသာ မိတ်ဆက်ပေးကြတဲ့ သစ္စာရှိမှုကို ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အလုပ်အပေါ် သစ္စာရှိမှ ယုံကြည်မှုရမယ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လို့ အလုပ်ဖြစ်ကြမယ်မဟုတ်လား။
နောက်တစ်ခုကတော့ ထိုင်းဘက်ခြမ်းက အားလုံးတာဝန်ယူပါတယ်။ စက်ရုံဈေးပေါ်မှာ (2%)ယူပြီး လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းဘက်က တစ်ဦးက ပစ္စည်းမှာပေးတာ ပစ္စည်းစစ်ပေးတာက အစ ထိုင်းဘက် ကိစ္စမှန်သမျှ တာဝန်ယူရပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့တော့ ဈေးကွက်ထဲက ပေါက်ဈေးကို ထိခိုက်ခံလို့မဖြစ်တာကြောင့် ဈေးအပို ထပ်တင်လို့မရပါဘူး။ ဒါတွေကို ထိုင်း-မြန်မာနှစ်ဘက် ကုန်သွယ်မယ့်သူတွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တစ်နှစ်လုံး အုန်းရည်ရောင်းကောင်းသလို
ကိုယ့်ရွှေပြည်ကြီးက အုန်းရည်ရောင်းကောင်းနိုင်မလား ???
အုန်းရည်သောက်ရန် အုန်းသီးတစ်လုံးကို ဘတ်ငွေ(၂၀မှ ၃၀)အထိ ပေးရပါတယ်။
ဒီနေ့လိုချိန်ခါကြီးထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရောင်နီသမ်းချိန်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရေလွှမ်းချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသား လုပ်ငန်းရှင်များအပြင် ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များပါ မြန်မာပြည်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်နေကြပါပြီ။ ပြီးခဲ့သောနှစ်တွေက ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ရေကြီးမှုများက စီးပွါးရေးဂယက်များစွာ ရိုက်ခတ်စေခဲ့ပါတယ်။ ရေတိုရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအားလုံးလိုလိုကို ရေလွှမ်းမိုးမှုများက ဂယက်ရိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ရောင်နီသမ်းချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားရှိတဲ့ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကလည်း အားတက်သရောရှိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အားသာချက်တွေ အပေါ်မူတည်ပြီး အနာဂတ်စီမံကိန်းတွေလည်း ရေးဆွဲကြ ပြင်ဆင်ကြ ပြောင်းရွေ့ချင်လာကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာခြင်းနောက်ကွယ်မှာ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာလေလ့လာခြင်းများလည်း ဒွန်တွဲပါလာကြပါပြီ။ ဒါကြောင့် မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ခြင်းက အနာဂတ်မြန်မာပြည်စီပွါးရေးတိုးတက်ခြင်းကို တနည်းတဖုံ ပြသရာရောက်နေပြန်ပါတယ်။
အုန်းသီးရေခဲမုန့်ကို အပေါ်က မြေပဲ၊ ငှက်ပျောသီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီး တခုခု ထည့်ပြီး ချောကလက်ရည်ဆမ်းထားပါတယ်။ တန်ဖိုးငွေမှာ ဘတ်ငွေ(၂၅)ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံကို အလည်လာကြတာတဲ့ ဧည့်သည်တွေနဲ့ ခရစ္စတလ်ရဲ့ မောင်လေးများ၊ ညီမလေးတို့တတွေက အမြဲမေးလေ့ရှိကြပါတယ် မြန်မာပြည်ပြန်ရင် ဘာစီးပွါးရေးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ၊ ထိုင်း-မြန်မာ ဘာစီးပွါးရေးတွေလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ။ အရင်းအနှီးဘယ်လောက်လိုသလဲ၊ ထိုင်းမှာ စီးပွါးရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ လိုသလဲ၊ ထိုင်း-မြန်မာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အပြင် အခြားဆက်စပ် ဘာတွေ လုပ်လို့ရနိုင်သလဲ စသည် စသည်ပေါ့...
ဒီလိုအကြောင်းတွေ အမေးခံရတာများတာက တစ်ကြောင်း၊ ရွှေပြည်တော်ကြီးရဲ့ ကောင်းသော အပြောင်းအလဲများဖြစ်လာတာ၊ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုရှိလာတာ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အနေကြာလာတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်မိသားစုကို တန်ဖိုးထားတဲ့ သူတွေ အိမ်ပြန်ချင်ကြတာ အစရှိသည့် အကြောင်းပြချက်ကိုယ်စီရှိကြသည်မို့ “ကူးသန်းဖလှယ် စီးပွါးရေးနယ်” ပိုစ့်လေးကို ဘလော့ဂါများနာမည်နဲ့ ဇာတ်လမ်းဆင် ရေးသားဖို့ မြစ်ဖျားခံလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အုန်းရည်နဲ့ သကြားနဲ့ ရောကျိုပြီး အုန်းသီးခွက်လေးထဲ ပြန်ထည့်၊ အုန်းသီး အသားလေးကို ခြစ်ထည့်ထားပြီး ရေခဲဘူးတွေထဲ ထည့်ထားလိုက်ရင် အုန်းသီးဂျယ်လီဖြစ်သွားပါပြီ။ ဘတ်(၃၀မှ ၅၀)အထိ ပေးရတတ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ မဟုတ်ပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့ လက်လှမ်းမီရာမှာ စီးပွါးရေး ဘာတွေ လုပ်လို့ရနိုင်မလဲ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းလေးတွေ လုပ်လို့ရနိုင်မလား၊ မြင်အောင် သတိထား လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ခရစ္စတလ်တို့တတွေက သတိမထားဖြစ်ကြလို့ပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်းက တနေရာတည်းမှာပဲ တသမတ်ရပ်နေကြမယ့်သူတွေ မဟုတ်ကြလေတော့ ခုချိန် လခစားဘဝဖြစ်ပေမယ့်လည်း တချိန်မှာ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာကြမယ်၊ အလုပ်ထဲမှာ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်လာကြမယ်မဟုတ်လား။
ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်မိတဲ့အခါ တခုခုများ စိတ်ကူးရသွားမယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါပြီ။
ဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့ ထိုင်းအမျိုးသမီးလေးက အသက်(၂၂) နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ခရစ္စတလ်အတွက် တကယ့် အိမ်နီးချင်းကောင်းတွေကို တွေ့ဆုံခဲ့ရတာပါ။ ကလေးနှစ်ယောက်အမေလည်းဖြစ်၊ သူ့အမျိုးသားကိုလည်း စီးပွါးရေးဝိုင်းကူလို့ တကယ်ခင်ဖို့ကောင်းပြီး စိတ်သဘောထားဖြူသူလေးပါ။
သူတို့ လုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်လာတာမြင်တော့ ကိုယ့်နိုင်ငံက အိမ်တွင်းစီးပွါးရေးလုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်း အခုလိုပဲ ကြီးပွါးတိုးတက်စေချင်ပါတယ်။ ဘဝများစွာကို တိုးတက်စေချင်ပါတယ်။
ကိုယ်က အီကိုနဲ့ ဘွဲ့ရထားတာလည်း မဟုတ်၊ စာရေးတာကလည်း မကျွမ်းကျင်၊ စီးပွါးရေးလည်း မလုပ်တတ် ကိုယ်သိထားတာလေးတွေကိုသာ စေတနာနဲ့မျှဝေလိုတာမို့ အမှားအယွင်းဖြစ်သွားရင် နားလည်ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ရင်းးးး။
ကူးလူးဖလှယ် စီးပွါးရေးနယ် ပထမပိုင်း
ကူးလူးဖလှယ် စီးပွါးရေးနယ် ဒုတိယပိုင်း
သူငယ်ချင်း “ဂျက်”က မေးတယ်လေ
နေပါအုံး ဒါဆို အလုပ်များနေတဲ့ သူက ဘာတွေလုပ်နေတာလဲတဲ့
သြော် စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုတာ တတ်ကျွမ်းတဲ့သူတွေကို စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ပဲ လိုတာလေ ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ဖို့ မလိုဘူးကွဲ့ ဟဲ ..ဟဲ.. :P
သေပီ ဆာ...တဲ့လေ :P
ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ရှုအားပေးကြတဲ့ သူများအားလုံး၊
ကွန်မန့်ပေးကြသူများ၊ ကွန်မန့်မပေးပဲ တိတ်တိတ်လေး လှည့်ပြန်သွားသူအားလုံးနဲ့
ပိုစ့်ထဲမှာပါဝင်သော မခင်ဦးမေ၊ ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)၊ ညယံ၊ Jasmine (တောင်ကြီး)နဲ့ တီချမ်း၊ အမှောင်ထုထဲက အလင်းစက်၊ မောင်မျိုး တို့ကို လေးစားစွာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။
Posted by Crystal at 11:28 PM 15 comments
ကူးလူးဖလှယ် စီးပွါးရေးနယ်... (ဒုတိယပိုင်း)
ခုတလော့ ဟင်းတွေ တမျိုးမျိုးပြီး ချက်ပြပြီး နှိပ်စက်နေတယ်ပေါ့။ အခုပဲ တီ မှာထားတဲ့ ထိုင်းပိုးထည်တွေကို ပစ္စည်းတွေ သေချာထုတ်ပိုးပြီး၊ ပစ္စည်းစစ်တာတွေ လုပ်နေပြီလေ။ တီလိုချင်တဲ့အချိန် ဘွဲ့ယူမယ့်သူတွေအတွက် အချိန်မီ ပို့ပေးမှာပေါ့။ လီနင်သားတွေကိုတော့ စက်ရုံက မှာထားတာဖြစ်လို့ သူတို့ နယ်စပ်ကို တိုက်ရိုက်ပို့ပေးလိမ့်မယ် တီရေ။ ပွဲနေပွဲထိုင်ဝတ် ထိုင်းပိုးထည်နဲ့ အီတလီပိုးထည်တွေလည်း နမူနာပို့ပေးလိုက်မယ်နော့။ ဒီတခါ ဘန်ကောက်ရောက်တဲ့အခါ စိတ်ဝင်စားရင် စက်ရုံကို ဈေးသွားဆစ်ကြတာပေါ့။ ဒေါ်သလင်း မျှော်နေတဲ့ ပိုစ့်လေးလည်း မေ့မသွားနဲ့အုံးနော်။ ...ရေးပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါတီရေ။ ဘိုင့်ဘိုင်။
လီနင်သား အနေနဲ့ အထည်၏ အရည်အသွေး ကွာခြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်း အစားစားရှိကြလေသည်။
ဈေးနှုန်းနှင့် မိမိလိုချင်သော လီနင်သား အရည်အသွေးကို စက်ရုံမှ လက်ကားမှာယူနိုင်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းလှလှ ဝတ်လိုတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက်
ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်၊ ဘန်ကောက်က ပြောနေပါတယ်..သြော် ညယံ ဘလော့ရေးတဲ့ ညီမလေးလား။ ညီမလေးကို မြင်ဖူးချင်လိုက်တာ။ ဘန်ကောက်လာလည်အုံးလေ။ ညီမလေးသာ လာရင် အလုပ်တွေ ပစ်ပြီး လိုက်ပိုပေးပါ့မယ်။ အင်း ..အင်းး သြော် ဟုတ်ပြီ ညီမလေးက သတို့သမီးတို့၊ ဘွဲ့ယူတဲ့သူတို့ အလှဆင်တဲ့ အမျိုးသမီး လက်ဝတ်ရတနာဆိုင် ဖွင့်ချင်တာလားးးးး။
ထိုင်းမှာက အလှဆင် လက်ဝတ်ရတနာတွေ စက်ခတ် ဒီဇိုင်းတွေ ရှိတယ်။ စက်ရုံကို ဒီဇိုင်းပေးပြီးတော့ ထုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော် သူတို့ ဒီဇိုင်းကို ယူလို့ရတာလည်းရှိပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို ခတ်ခိုင်းလို့လည်း ရပါတယ်။ သူတို့ ဒီဇိုင်းတွေထဲက ရွှေရောင်မှုတ်နဲ့ ငွေရောင်မှုတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်။ အဲလို အရောင်မှုတ်တွေက အနှစ် (၂၀)ခိုင်ခံ့တယ်လို့ အာမခံတာ ဈေးအကြီးဆုံးနော်။ အဲဒါက ကျောက်အစစ်တွေနဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ ကျောက်တွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း တို့များရဲ့ ရွှေပြည်ကြီးကပေါ့ ညီမလေးရေ။
ညီမလေးအနေနဲ့ ဆိုင်မှာ တင်ပြီး ရောင်းလိုတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို လက်ကားငှားရမ်းခြင်း လုပ်လိုတာဖြစ်ဖြစ် အစ်မအနေနဲ့ အကြံတစ်ခုပေးချင်တာက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ဈေးနှုန်းကို ထိုင်းစက်ရုံက ခတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ဈေးလည်း သက်သာ၊ ကိုယ်အနေနဲ့လည်း အများကြီး ရင်းနှီးထားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ငှားဝတ်သူတွေအနေနဲ့လည်း ပစ္စည်းလှလှလေးကို ဈေးသက်သက်သာငှားနိုင်တာပေါ့။ အငှားသွက်တယ်ဆိုရင် သုံးနှစ်လောက်ဆို မြတ်နေပြီ ဖြစ်လို့ ပစ္စည်း ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းအရတော့ ကိုက်နေပြီလေ။ ညီမလေး မြန်မာပြည်က ဈေးကွက်ကို လေ့လာပြီးရင် ဒီက စက်ရုံတွေမှာ ဒီဇိုင်းတွေ ရွေးချယ်ပြီး မှာယူလို့ရပါတယ် ညီမလေးရေ။ ပစ္စည်းတွေ စိတ်ချရတဲ့ထုတ်ပိုးမှုနဲ့ မဲဆောက်လမ်းကြောင်းအပြင် တာချီလိတ် လမ်းကြောင်းတွေကလည်း ပို့လို့ရနေတာကြောင့် အစစ အဆင်ပြေပါစေမှာပါ။
..ရပါတယ် ညီမလေးရယ် အစ်မဆီမှာ လာပြီး ကွန်မန့်ပေးကြတဲ့သူက ခပ်နဲနဲလေ။ ဒီအထဲက ကွန်မန့်မှန်မှန်လာပေးတဲ့ ညီမလေးကို ဒီလောက်တော့ ကူညီရမှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလားးးး။
အိုကေတယ်ဆိုရင်သာ အစ်မဆီကို အီးမေးဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်သာ ဆက်လိုက်နော်။
ဘလော့ကိုလည်း အားတဲ့ အခါများ စာလေး ဘာလေး ရေးအုံးလေနော်။ ဒါပဲနော် ဘိုင့်...။
လခစားအလုပ်ကို စိတ်ကုန်ကာ စီးပွါးရေးနယ်ပယ်သို့ ခြေစုံပစ်ဝင်လာသည့် ချည်ထည်ပိုးထည်တိုက်ပိုင်ရှင် “တီ”အဖြစ် တီချမ်း
ပွဲနေပွဲထိုင်သွားလတ်ဝတ်ရတနာအလှဆင်မြန်းသည့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်“ညီမလေး”အဖြစ် ညယံ
*****ယခုပိုစ့်တွင် အမည်ပါဝင်သော ဘလော့စာမျက်နှာပိုင်ရှင်များ၏ တကယ့်အဖြစ်မှန်မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ခရစ္စတလ်၏ စိတ်ကူးမျှသာဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကြိုတင်ခွင့်မတောင်းပဲ နာမည်အလွဲသုံးစားလုပ်မိပါသဖြင့် အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ဒီမှာ ပထမပိုင်းက ကူးလူးဖလှယ် စီးပွါးရေးနှယ် (ပထမပိုင်း)
နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်း အနေနဲ့ conclusions ကျန်ပါသေးတယ်။ စိတ်ရှည်စွာနဲ့ အားပေးကြတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တပတ်အတွင်း အဖတ်အများဆုံးပိုစ့်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဘလော့ကို လည်လည်လာကြတဲ့ ခရစ္စတလ် သိသော မသိသော သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ အမှားများရှိရင် အမြင်မတော်တာများရှိရင် ကွန်မန့်မှာ ရေးပေးသွားကြပါအုံးလို့။
Posted by Crystal at 5:55 PM 8 comments
တစ်ခါက မြို့တော်ဘန်ကောက်ဝယ် destop တစ်လုံး၊ laptop တစ်လုံး၊ ဖုန်းသုံးလုံး အပြင် နားက နားကြပ်များနှင့် အလုပ်များနေသော မိန်းမတစ်ယောက်ရှိလေသည်။ (ရှိတာလေးတွေ ကြွားနေခြင်းဖြစ်သည် ကြွားပါစေပေါ့...)
စပ်စုကြည့်ရအောင် ဘာတွေ လုပ်နေပါလိမ့်...
ခရစ္စတလ်ရဲ့စိတ်ကူးထားတဲ့ အိမ်ကလေးမှာ စိုက်ချင်လို့ သစ်ခွပန်းခြံက ဓာတ်ပုံရိုက်လာတာ :)
->ဟုတ်ပါတယ် ခရစ္စတလ်ပါ။ သြော် “ချော” လား ပြောလေ ဘာမှာချင်လဲ ဘန်ကောက်က...။
အင်းလေ ရတာပေါ့ အစ်မ ရှာပေးမယ်။ သစ်ခွပန်း အရောင်လှလှရှာပေးမယ်၊ အကိုင်းဖြတ်မဟုတ်ဘူး၊ အပင်ပေါက်လည်း ဖြစ်စေရမယ်၊
အပင်တွေထဲ ထည့်ရမယ့် ဆေးတွေလည်း ရှာပြီး ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်။
ပို့တဲ့ကိစ္စလား ဒါလည်း မပူနဲ့ ဘန်ကောက်ကနေ မဲဆောက်ကို ပို့ပေးမှာပေါ့။ မဲဆောက်ရောက်ရင် ကိုမျိုးက မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်ကို ပို့ပေးတဲ့ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လေနော်။
“ချော”အနေနဲ့ ရန်ကုန်ဆင်းယူချင်လား၊ မန္တလေးအရောက် ပို့ပေးရမလား။
ပို့ရမယ့်နေရာ လိပ်စာကိုသာ အီးမေးနဲ့ ပို့ပေးထားနော်။ ပစ္စည်း Qualityကို စိတ်ချ၊ ဈေးနှုန်းလည်း အသက်သာဆုံးဖြစ်အောင် ပန်းမျိုးစုံပေါလှတဲ့ ကချနဘူရီမြို့က ပန်းစိုက်ဆိုင်တွေကနေ ဝယ်ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်။
ခရစ္စတလ်အတွက်တော့ ကချင်ဆားမုန့်လေးတွေသာ လူကြုံရှိရင် ပို့ပေးလိုက်ပါ ဟဲ ဟဲ
“ချော” အတွက် သစ်ခွစိမ်းစိမ်းလေး
“ လိုတာရွေး ကြိုက်ဈေးနဲ့ ဝယ်”
သစ်ခွပန်းပင်များ မျိုးစေ့များ မျိုးပင်များ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံအရောက်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်... :)
->ဟယ်... မဦး၊ အမယ် ခုပဲ သတိရနေတာ၊ နေကောင်းလား။ ဘန်ကောက်က ဘာလိုချင်လဲပြော...။ အိတ်လိုတယ်လား၊ ပိုက်ဆံအိတ်လား ခရီးဆောင်အိတ်လား ဒါမှ မဟုတ် အိတ်မျိုးစုံလား။
အင်း ...အင်း ဟုတ်ပြီ ဒါဆို ဆိုဒ်စုံ ဒီဇိုင်းအစုံလိုချင်တယ် ပြန်ရောင်းချင်တယ်ဆိုရင် စက်ရုံနဲ့ ချိတ်ပေးမယ်လေ။
အီတလီသရေအိတ်စက်ရုံက သရေအိတ်တွေက သရေအစစ်တွေလေ မဦးရဲ့သိလား။
အင်း သူတို့က ထိုင်းမှာ စက်ရုံထိုင် ပြီးတော့ ဥရောပကို ပို့ကြမှာလေ။
လောလောဆယ် သူတို့ကလည်း မြန်မာပြည်က တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်လိုချင်နေကြတာ
နောက်အဆင်ပြေရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စက်ရုံတည်ချင်ကြတယ်။
အဆင်ပြေရင် မဦးပဲ ဒီလုပ်ငန်းလေးကို ဦးစီးစေချင်တယ်။
အိမ်ဆေးခန်းလေးလည်း ဖွင့်၊ မဦးရဲ့ ချစ်ချစ်ရှာတဲ့ငွေတွေကို စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ ကန်သင်းဖြစ်အောင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွါးရေးလည်း လုပ်။ ကိုင်း ဟန်မကျဘူးလားးးးး။ ဖြစ်ပါတယ်...မဦးက လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေ အားလုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်တာ ပစ္စည်းပို့ပေးတာအစ ကူညီရမှာပေါ့။ ခရစ္စတလ်ကို ကော်မစ်ရှင်လေး(2%)လောက် ပေးရင် ကျေနပ်ပါတယ် ဟီ ဟိ :P
အင်း အင်း ဘန်ကောက်က ဆေးရုံတွေမှာ ဆေးစစ်ဖို့ လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ လူနာတွေလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ သူတို့ စစ်ချင်တဲ့ ဆေးရုံနဲ့ ဝယ်ရမယ့် ဆေးတွေကို သေချာဆောင်ရွက်ဖို့ ကြောင်ဖြူများရှင် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဆေးရုံက ထိုင်းနာစ့်မလေးတွေ ချောတယ်မဟုတ်လား ဟဲ ဟဲ၊ စိတ်သာချပါလေ။
လူနာတွေ အဆင်ပြေတော့ မဦးလည်း မျက်နှာရ၊ လူနာတွေလည်း အဆင်ပြေစေ၊ ဒီတော့မှ ခရစ္စတလ် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ရတော့မှာပေါ့ရှင် ဟုတ်ဘူးလားးးးး။ ဒါပေါ့ ကောင်းတယ်လေ...
ဒါဆို သရေအိတ်နမူနာနဲ့ ဈေးတွေပို့လိုက်မယ် ဟိုဘက်မှာ အိုကေတယ်ဆိုရင် ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ မဦး စီစဉ်လိုက်တော့နော်။
အိုကေ this man နဲ့ this man တွေပဲ ကူညီရမှာပေါ့နော်။ အိုကေ..ဒါပဲနော် ဘိုင့်....။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားတံဆိပ်များထုတ်သော စက်ရုံများရှိရာတွင် ရောင်းလိုသော တံဆိပ် သို့မဟုတ် မိမိနှစ်သက်သော အရည်အသွေး တံဆိပ်များထုတ်သည့်စက်ရုံများကို ထိုင်းမှ မြန်မာသို့ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူတင်သွင်းနိုင်ပါတယ်... :)
ကြောင်တစ်ကောင်ကို ဘတ်တစ်သောင်းကနေ ဘတ် သိန်းဂဏန်းအထိ ရှိတယ်နော်...
->မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီး စီးပွါးရေးလုပ်နေတဲ့ ..“ဂျက်”ပါလား၊ ပြောလေ...ဘယ်လိုလဲ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးမှာ အိုကေနေပြီလား။ ဟယ် ဟုတ်လား ...အိမ်အလှမွေးကြောင်တွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်လား၊ ကောင်းတာပေါ့။
ကြောင်ချစ်တဲ့သူကြီးဆိုတော့။ အင်း... ပြော- ဘန်ကောက်က ဘာကူရမလဲ။ သြော် ရပါတယ် ဘန်ကောက်ထဲမှာ အလှမွေး ကြောင်မျိုးစုံရောင်းတဲ့ဆိုင်၊ ခွေးနဲ့ အလှမွေးငါးတွေပါ မှာလို့ရပါတယ်။ ဈေးကတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် ဂျက်ရေ...သူတို့က နယ်စပ်အထိ ပို့ပေးတာလည်းရှိတယ်။ ဒါက လက်ကားနယ်ဈေးတစ်မျိုး၊ ဆိုင်မှာ ရောင်းတဲ့ ဘန်ကောက်တွင်း လက်ကားဈေးလည်း ရှိပါတယ်။ ဆိုင်က ရနိုင်မယ့် အကောင်အမျိုးအစားနဲ့ ဈေးနှုန်းကို အီးမေးထဲက attch file နဲ့ ပို့ပေးလိုက်မယ် “ဂျက်”လိုချင်တဲ့ ကြောင်လေးတွေကို ရွေးပြီး ဈေးနှုန်းလည်း သင့်တော်တယ်ဆိုရင် မှာပေးပါ့မယ်။ နယ်စပ်ပို့ဆောင်ရေးကတော့ “ကိုမျိုး”က စီမံပေးနိုင်ပါတယ်၊ ကြောင်လေး သွားကြည့်ဖို့ကတော့ ကြောင် ကျွမ်းဆရာ ကြောင်ဖြူများရှင်ကိုပဲ အားကိုးရတော့မှာပေ့ါ။
အစစ အဆင်ပြေစေရမယ်စိတ်ချ၊ ကျန်းမာပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အကောင်လေးတွေ “ဂျက်”ဆီကို အရောက်ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်။ သြော် ဟုတ်ပြီ...အမွှေးပွဆေးတွေ ဖြူးထား မဖြူးထားလည်း စစ်ပေးမယ် ရပါတယ် အားနာစရာဘာမှ မလိုပါဘူး၊ ခရစ္စတလ်ကလည်း ကြောင်လေးတွေ ချစ်တယ်၊ ကူညီဖို့လည်း ဝါသနာပါတယ် ဒါကြောင့် ဘန်ကောက်မှာ လိုအပ်တာရှိရင် ဖုန်းလေးသာ ဆက်၊ ဖုန်းဆက်လို့ အဆင်မပြေရင် အီးမေးပို့နော်။ ပြီးမှ အသေးစိတ် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကြမယ်လေ။
ဟုတ်ပါပြီ သိပ်လည်း လွမ်းမနေနဲ့အုံးနော် နီးနီးလေး နေကြပြီးတော့ :P စတာ.. ဟိ။ ဘိုင့်ဘိုင်နော်။
ဒီခွေးလေးတွေက တစ်ကောင် ဒေါ်လာနှစ်ရာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ သစ်ခွ လက်လီ လက်ကားဖြန့်သည့် သစ်ခွခြံအကြီးဆုံးပိုင်ဆိုင်သူ “ချော”အဖြစ် ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)၊
ဆေးနဲ့ ဆေးရုံကိစ္စများ တာဝန်ခံသူလည်းဖြစ်၊ ထိုင်းမှ ကြောင်များ export import တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ် “ကြောင်ဖြူများရှင်”အဖြစ် အမှောင်ထဲကအလင်းစက်၊
ကြောင်များ export import တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသူ “ဂျက်” အဖြစ် Jasmine(တောင်ကြီး)၊
သရေအိတ်အမျိုးမျိုး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်နှင့် စာနာစိတ်နဲ့ ဆေးကုတဲ့သူအဖြစ် “မဦး”အဖြစ် မမကွမ်-ခင်ဦးမေ
မဲဆောက်မှ ဖမားနဲ့ ယပလပ် နယ်ပယ်များအတွက် တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် “ကိုမျိုး” မောင်မျိုး
မှတ်ချက်။ ။ ပိုစ့်ရေးနေတာ နဲနဲကြာနေပြီ ကြားဖြတ်ပိုစ့်တွေလည်း တင်ဖြစ်လိုက်သေးတယ် ပြီးတော့ ပိုစ့်ကလည်း ရှည်လာလို့ ဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။ စီးပွါးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပိုစ့်ဆိုတော့ ဦးနှောက်စားတယ် ရေးရတာ ဘောင်ကြီးနဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ ရေးတဲ့ပုံစံကလည်း ကိုယ်က စာရေးဆရာမဟုတ်လေတော့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ရေးရမလဲ စဉ်းစားလို့ကို မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဟိုနေ့က မောင်မျိုးနဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်ရင်း အကြံရသွားတယ်။ ပိုစ့်အဟောင်းတစ်ခုရေးထားတာရှိတယ် အဲဒီပုံစံနဲ့ပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီပိုစ့်အဟောင်းရေးတုန်းက အစ်မတစ်ယောက်နဲ့ နှစ်ယောက်ပေါင်းရေးတာ အခုတော့ တစ်ယောက်တည်းပေါ့။ ဟိုးးးးးးးးတုန်းက ပိုစ့်အဟောင်း ဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေ မှတ်မိကြမှာပါ။
*****ဇာတ်လမ်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အမည်ပိုင်ရှင်တွေ၏ ဖြစ်ရပ်မှန် မဟုတ်ပဲ ခရစ္စတလ်၏ စိတ်ကူးမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ရန် လာပါအုံးမယ်နော်။ ခရစ္စတလ်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဘလော့ဂါများ၏ နာမည်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်မိပါတယ် အဲ...မကျေနပ်ကြဘူးဆိုရင် ဘန်ကောက်ကိုသာ လာခဲ့ကြပါတော့ ရှင်... :)
Posted by Crystal at 9:29 PM 14 comments
FREE on Friday 13း)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လမ်းများမှာ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပလို့ရပြီပေါ့နော်
မြန်မာပြည်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ခရစ္စတလ်လည်း ဝမ်းသာနေပါတယ် ပျော်နေပါတယ်.......
ပိတ်လှောင်မှုတွေက လွတ်မြောက်ကြပြီ၊ ဝေးကွာနေသူတွေ ပြန်ဆုံခွင့်ရပြီ ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခတွေက ချမ်းသာရာရပြီ...........
မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေများ ပျော်လွန်းလို့ ကနေကြမလားတောင် တွေးမိတယ်
အားလုံး လွတ်လာပြီဆိုရင်တော့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံခဲ့ရသူတွေအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားခဲ့ရသော ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ လိုအပ်နေမှာပါ။
ကျမတို့လို ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်လာဖို့ထက် သူတို့သူတို့အားလုံးသည် စွန့်လွှတ်စွန့်စားပေးဆပ်သူတွေပါ၊
ဒါကြောင့် အစစ ဂရုစိုက်နိုင်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..........
ပုံလေးတွေကို google search က ကူးယူပါတယ်......
Thanks to Catherine Donna
For giving my pops his glory
And thats all he ever want
Mom camealittle after
Then all of the pressure
Made em' fight one another
See the pain would never last
He knew the world was out for grabs
And he searched to find his
So I search to find my
Id have to hustle just to make it through
Cause the girls dont think im cool
And because of that I didnt care
Whether or not I went to jail
Cause thats all I ever knew
Tellin me I need to slow down
Cause everybody in the whole town
Cause they know how I get down
Foreigner from another town
After so many hit the ground
And we ain't gonna stop now
Until we get that...
Won't stop til' I find my
If you wanna be free, just praise G O D
I wanna be free(wanna be free), I wanna be free(wanna be free, yeah)
Posted by Crystal at 12:29 PM 20 comments
အကယ်၍ ဘုန်းဘုန်းဥာဏ်ဆိုဒ်မှ ကူးယူတင်ဆက်ပါသည်။
ချင်းမိုင်မြို့က The International Horticultural Exposition Ratchaphruek 2011မှာ ပြသထားပါတယ်။
အကယ်၍ မင်းအသိုင်းအဝိုင်းက တုန်လှုပ်ခြောက်ချားပြီး ဒါတွေဟာ မင့်ကြောင့်လို့ ဝိုင်းဝန်းပြစ်တင်ကြတဲ့အခါ မင်းဟာ တည်ငြိမ်စွာနှင့် ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်...
အကယ်၍ အားလုံးက မင်းကို မယုံသင်္ကာ ဖြစ်လာတဲ့အခါ သူတို့ကို နားလည်စွာ ခွင့်လွှတ်ရင်းနှင့် မင်းကိုမင်း ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိမယ်ဆိုရင်...
အကယ်၍ စောင့်သင့်တဲ့ အချိန်ကို စောင့်နိုင်ပြီး အဲဒီအတွက်လဲ မမောမပန်း နေနိုင်မယ် ဆိုရင်...
ဒါမှမဟုတ် မင်းရဲ့အကြောင်း မဟုတ်မတရား မုသားစကား ကြားရတဲ့အခါ မင်းကလဲ အလိမ်အညာတွေနှင့် မတုန့်ပြန်ဘူး ဆိုရင်...
ဒါမှမဟုတ် မင်းကို လူတကာက ဝိုင်းဝန်း မုန်းတီးတဲ့ အခါ မင်းကလဲ အမုန်းတွေ ပြန်မပွားဘူး ဆိုရင်...
အကယ်၍ စိတ်ကူးယဉ် အိက်မက်တွေဟာ မင်းအပေါ် မလွှမ်းမိုးစေပဲ စိတ်ကူးနိုင်မယ် ဆိုရင်...
ပြီးတော့ အတွေးအခေါ် စိတ်ကူးတွေဟာ မျှော်မှန်းချက် သက်သက်သာ မဖြစ်စေပဲ
အကယ်၍ အောင်မြင်မှု သုခနှင့် ဆုံးရှုံးမှု ဒုက္ခတွေကို ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ တူညီသောလောကဓံတရားတွေပါလားရယ်လို့ ခံယူနိုင်မယ်ဆိုရင်...
အကယ်၍ မင်းရဲ့ အမှန်စကားတွေကို လူလိမ်လူညာတွေက လှည့်စားပြောင်းလဲပြီး မုသားအဖြစ် ထောင်ချောက်ဆင်ပစ်တဲ့အခါ မင်းဟာ တည်ငြိမ်စွာနှင့် နာကြားနိုင်မယ် ဆိုရင်...
အကယ်၍ မင်းဘဝ တစ်ခုလုံး ပေးပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့်နှင့် ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတဲ့ အရာရာကို ဖျက်ဆီးခံ လိုက်ရပြီးတဲ့နောက် အင်မတန်မှ သေးငယ်တဲ့ တန်ဆာပလာ အရာရာနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မယ် ဆိုရင်...
အကယ်၍ မင်းနိုင်ခဲ့သမျှတွေ အားလုံး ကြွေတစ်လှည့် ကြက်တစ်ခုန် ပမာ တစ်လှည့်တစ်ခါတည်းနှင့် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင် ပြီးတော့ အစကနေ ပြန်စနိုင်မယ်ဆိုရင် ...
ပြီးတော့တစ်ခါ ဆိုးလှတဲ့ ကံကြမ္မာရယ်လို့ ဘယ်သောအခါမှ ငြီးငြူမနေဘူး ဆိုရင်...
အကယ်၍ သူများတကာတွေ လုပ်ပြီးသွားကြလို့ အချိန်အတော်ကြာမှ မင်း အလှည့် ရောက်လာတဲ့အခါ မင်းတစ်ယောက်တည်း နှင့်ပဲ အားနှင့် မန်နှင့် ဇွဲသတ္တိရှိရှိ ဆက် ကြိုးစားနိုင်မယ် ဆိုရင်...
အဲဒီလိုပဲ မင်းမှာ စိတ်အင်အားက လွဲလို့ ဘာဆို ဘာမှ မရှိတော့တဲ့အခါ အဲဒီ စိတ်အင်အားကို ခိုင်မာစွာနှင့်ပဲ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ထားနိုင်မယ် ဆိုရင်...
အကယ်၍ လူတွေနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံ ပြောဆိုတဲ့ အခါ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာကို စောင့်ထိန်းနိုင်မယ် ဆိုရင်...
ဒါမှမဟုတ် မင်းဧကရာဇ်တွေနှင့် အတူ လမ်းလျောက်နေရပေမဲ့ မာန် မာန သွေး မကြွဘူး ဆိုရင်...
အကယ်၍ ရန်သူကဖြစ်စေ မိတ်ဆွေကဖြစ်စေ မင်းကို နာကြည်းအောင် မလုပ်နိုင်စေရင်၊
အကယ်၍ လူတိုင်းကို တန်းဘိုးထား လေးစားပေမဲ့ စွဲလမ်းမှု သံယောဇဉ်တွေ ထားမနေဘူးဆိုရင်...
အကယ်၍ တိုတောင်းလှတဲ့ မပစ်ပယ်နိုင်တဲ့ တစ်မိနစ် အတွင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ စက္ကန့်ခြောက်ဆယ် အဖြစ် အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်...
ငါ့သားရေ ... မင်းဟာ အရာရာရှိတဲ့ အရာရာဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဆုပ်ကိုင်လို့
အရာရာ ဘာမဆို မင်း စွမ်းနိုင်ပြီပေါ့။ အဲဒီတော့ မင်းဟာလဲ ယောက်ျားကောင်း တစ်ယောက်ပဲပေါ့။
အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်လိုသူတွေ သို့မဟုတ် ယှဉ်တွဲဖတ်လိုသူများ အတွက်လည်း မူရင်း အင်္ဂလိပ် ကဗျာကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
VOA မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်က (၂၀၁၀) နိုဝင်ဘာလ (၁၆)ရက် အင်္ဂါနေ့ညမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ “အကယ်၍” ဆိုတဲ့ ကဗျာကို ထုတ်လွှင့်တာကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ကိုကျော်အောင်လွင် စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ “အနုပညာ မိုးကောင်းကင် ကဏ္ဍ” မှာ ဝိုင်းတော်သူတွေက ရွတ်ဖတ် ပြထားကြတာပါ။ နားထောင်လို့ အလွန် ကောင်းပါတယ်။
ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ စိတ်အား ငယ်ငယ်၊ ဘယ်လို ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကိုပဲ ချီတက်တက်၊ ကိုယ့် အနီးအပါးက လိုက်ပါအားပေးနေတဲ့ အနီးဆုံးနှင့် အရေးအကြီးဆုံးလူလို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘာသာပြန်လက်ရာကလဲ တကယ့် မြတ်နိုးစရာ၊ စွဲလမ်းနှစ်သက်စရာ နူးညံ့ သိမ်မွေ့လှတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က Rudyard Kipling ရဲ့ If လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီကဗျာကို ဘာသာပြန်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ “စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို ဖြစ်စေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ကဗျာတွေထဲက ထိပ်တန်းကဗျာတစ်ပုဒ် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒီကဗျာကို အခြေခံပြီးတော့ အနုပညာ တင်ဆက်မှုတွေလဲ ပုံစံမျိုးစုံ ရှိကြောင်း ” ကိုကျော်အောင်လွင်က ရှင်းပြတာကို ကြားရပါတယ်။
ကဗျာဆရာ Rudyard Kipling ကို ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘုံဘေ (မွန်ဘိုင်း) မြို့မှာ ဒီဇင်ဘာ (၃၀)ရက် (၁၈၆၅) ခုမှာ မွေးဖွားပါတယ်။ Kipling ဟာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကဗျာနှင့် ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုရှည်တွေကို ရေးသားခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ စာပေဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုကို (၁၉၀၇) ခုနှစ်မှာ လက်ခံ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် ရေးတဲ့ နိုဘယ်လ်ဆုရ စာရေးဆရာတွေထဲမှာ သူဟာ ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး ဒီနေ့အထိ အသက် အငယ်ဆုံး စာပေနိုဘယ်လ်ဆုရှင်လဲ ဖြစ်ပါသတဲ့။
သူရေးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး စာပေလက်ရာတွေကတော့ The Jungle Book (1894)၊ Kim (1901) The Man Who Would Be King (1888) အပါအဝင် ဝတ္ထုတိုများစွာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နန်းမြို့တော် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့တော် အကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ Mandalay ဆိုတဲ့ ကဗျာ (1890)ကလဲ သူရဲ့ နာမည်ကြီး ကဗျာတွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗွီအိုအေ သတင်းတင်ဆက်သူတွေ ရွတ်ဖတ်ပြတဲ့ “အကယ်၍” ဆိုတဲ့ ကဗျာကို စာလုံးများအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ဘလော့ဂ် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အမှန်ကို ပြောရရင် ဒီကဗျာ မြန်မာပြန်ကို စာရေးသူ မတွေ့ဖူး မဖတ်ဖူးပါဘူး။ ဒါကြောင့် စာပိုဒ်တွေကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ တွေ့ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်လိဘာသာ ကဗျာကို ကြည့်ပြီး ခွဲထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ကဗျာကိုလဲ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘလောဂ်ပုံစံကြောင့် တစ်ကြောင်းထဲပြီးရမဲ့ စာတွေက နှစ်ကြောင်းဖြစ်၊ နှစ်ကြောင်းပိုဒ်တွေက သုံးကြောင်းဖြစ်နေတာတွေကိုလဲ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သတ်ပုံ၊ အဖြတ်အတောက်စတဲ့ မှားယွင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ရင် သို့မဟုတ် ဘာသာပြန်သူရဲ့ မူလစာအထားအသိုနှင့် ကွဲလွဲနေခဲ့ရင် တင်ပြသူ ဘုန်းဉာဏ်ရဲ့ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
၁။ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း၊ အနုပညာ မိုးကောင်းကင် အစီအစဉ် (၁၆၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀) ညပိုင်း အစီအစဉ်။
၂၀၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀ နေ့က ရေးတင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ် အဟောင်းကို ပြန်တင်လိုက်ပါ။ ဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်းဥာဏ်ရဲ့ ဆိုဒ်ကို သွားလည်လို့ နှစ်ကူးနှုတ်ဆက်မိရင်း ပိုစ့်ဖတ်မိတော့ ဟတ်ထိသွားပါသဖြင့် ကူးယူလာပါတယ်၊ ဘုန်းဘုန်းဆီက approval မစောင့်ပဲ တင်လိုက်ပါပြီ။ ပိုစ့်ရဲ့ အဓိက ပွိုင့်ကို ပေါ်လွင်စေချင်လို့ မူရင်း ပိုစ့်ကို တင်ဆက်ပုံလေး ပြန်ပြင်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
နှစ်ကူးမှာ ရေးမယ့် ပိုစ့်လေးတစ်ခု စိတ်ကူးမိပေမယ့် အကောင်အထည်ဖေါ်တဲ့ဆီ မရောက်သေးပါဘူး။
ဘာလိုလိုနဲ့ နှစ်တွေလည်း ရွေ့ရွေ့လာလိုက်တာ 2012တောင်ဖြစ်နေပါပေါ့။ အလုပ်ဆိုဒ်ဘက်မှာတော့ ချင်းမိုင်က ပုံရိပ်တွေ တင်နေပါတယ်။
(ပိတောက်ရေ - ချင်းမိုင်ကို အစီစဉ်မရှိပဲ သွားလိုက်တာ၊ ခရီးထဲမှာလည်း ကျန်းမာရေးက မကောင်းတာမို့ ဖုန်းမဆက်ဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။ နောက်များမှလာအုံးမယ်လေ...)
ဘဝဆိုဒ်ကို အလုပ်များတာ အကြောင်းပြပြီး မရေးတော့ပါဘူးလို့တောင် စိတ်ကူးထားကာမှ နှစ်ကုန်ခါနီး နှုတ်ဆက်တဲ့သူတွေ၊ ခင်ရာမင်ရာ မိတ်ဆွေတွေ ဝိုင်းတဲ့ ဒီဘဝဆိုဒ်လေးကို ပစ်ပယ်နိုင်စွမ်းအားလည်း မရှိပါဘူး။ ကြိုးစားပြီး ရေးပါအုံးမယ်လို့နော်....း)
Posted by Crystal at 8:02 PM3comments